Usaende kuFrance: US inoburitsa France yekufambisa kuraira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Usaende kuFrance: US inoburitsa France yekufambisa kuraira
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Bhizinesi Kufamba • mhosva • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
CDC yakaburitsa Chiziviso cheNhanho 4 Yehutano Hutano kuFrance nekuda kwenzvimbo yepamusoro kwazvo yeCOVID-19 munyika
Usaende kuFrance nekuda kwe COVID-19
Kudzidzira kwakawedzera kungwarira muFrance nekuda kwehugandanga uye kusagadzikana kwevanhu
Kuratidzira muParis nemamwe maguta makuru kunoenderera muFrance uye kunotarisirwa kuenderera mumasvondo anotevera
United States Dhipatimendi reHurumende rakapa zvinotevera kuraira kwekufamba kweFrance:
Usaende kuFrance nekuda kwe COVID-19. Kudzidzira kwakawedzera kungwarira muFrance nekuda kwehugandanga uye kusagadzikana kwevanhu.
Verenga Dhipatimendi reHurumende's COVID-19 peji usati waronga chero rwendo rwekunze.
ICentre for Disease Control and Prevention (CDC) yakapa ziviso yeHurumende ye4 yekufamba kweFrance nekuda kweCOVID-19 inoratidza yakakwira kwazvo COVID-19 munyika. Shanyira Embassy's COVID-19 peji kune rumwe ruzivo nezve COVID-19 muFrance. Kune zvirambidzo munzvimbo zvinokanganisa mugari weUS kupinda muFrance.
Mapoka emagandanga anoramba achironga kurwisa kunogona kuitika muFrance. Magandanga anogona kurwisa pasina kana yambiro, achinanga nzvimbo dzevashanyi, nzvimbo dzekufambisa, misika / nzvimbo dzekutengesera, zvivakwa zvehurumende, mahotera, makirabhu, maresitorendi, nzvimbo dzekunamatira, mapaki, zviitiko zvikuru zvemitambo netsika, masangano edzidzo, nhandare, nezvimwe nzvimbo dzeruzhinji.
Kuratidzira muParis nemamwe maguta makuru kunoenderera muFrance uye kunotarisirwa kuenderera mumasvondo anotevera. Kukuvara kwepfuma, kusanganisira kupamba uye kupisa, munzvimbo dzine vashanyi kwakaitika nekusaremekedza kuchengetedzwa kwevanhu. Mapurisa apindura nemakoni emvura, mabara erabha, uye gasi remisodzi. Mumiriri weUS arikuyambira vafambi vehurumende yeUS vasingafambi kuenda kuParis nemamwe maguta makuru muFrance kupera kwevhiki.
Kana iwe ukafunga kuenda kuFrance:
Ona peji rewebhu re Embassy yeUS maererano neCOVID-19.
Shanyira iyo webhusaiti yeCDC paKufamba uye COVID-19.
Ziva nezvekupoterera kana uchienda kunzvimbo dzevashanyi nenzvimbo huru dzakazara vanhu.
Wongorora zvirongwa zvekufamba kana iwe uchizove uri muFrance kupera kwevhiki.
Tevedza rairo yezviremera zvemuno zvinosanganisira zvirambidzo zvekufamba zvine chekuita nechero mapurisa anoenderera mberi.
Tsvaga nzvimbo yakachengeteka, uye pekugara munzvimbo kana padyo nekuungana kukuru kana kuratidzira.
Tarisa midhiya yemuno kuputsa zviitiko uye gadzirisa zvirongwa zvako zvichibva paruzivo rutsva.
Nyoresa muSmart Traveler Kunyoresa Chirongwa (STEP) kuti ugamuchire maAlerts uye uite kuti zvive nyore kukuwana iwe mune emergency.
Tevedza Dhipatimendi reHurumende paFacebook neTwitter.
Wongorora Ongororo Yekuparwa Kwemhosva uye Chengetedzo yeFrance.
Iva nehurongwa hwezviitiko zve emergency.